धुम्बाराही बैठकमा झलनाथ खनाल किन गएनन् ?
Homeराष्ट्रिय खबरधुम्बाराही बैठकमा झलनाथ खनाल किन गएनन् ?
काठमाडौं, २ चैत्र । नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरुको बैठक धुम्बाराहीमा जारी छ । तीन महिनापछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठकमा ओली र नेपालसहित ११ जना नेताहरु उपस्थित् छन् ।
तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने उपस्थित् छैनन् । बैठकमा नेताहरु विष्णु पौडेल, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, घनश्याम भुषाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, रघुजी पन्त, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट सहभागी छन् । तर, वरिष्ठ नेता खनाल भने उपस्थित् छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच पछिल्लो समय सुमधुर सम्बन्ध थिए । उनीहरुबीच यसअघि गत कात्तिक २५ मा भेट भएको थियोे । आजको भेटवार्तामा नेताहरुबीच सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा एमाले विभाजनतर्फ उन्मुख भएका बेला दुई पक्षबीच संवादहिनताको अवस्था थियो।
बेइजिङमा धुलोको आँधी चलेपछि ३ सय ४१ जना बेपत्ता, ४ सय बढी उडान रद्द